Shina: Tranonkala maherin’ny iray hetsy no nakatona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Marsa 2019 3:32 GMT
Araka ny tatitry avy amin'ny Southern Metropolis tamin'ny 18 Janoary 2010, tranonkala maherin'ny iray hetsy no nakatona tany Shina rehefa nanomboka nampiharina ny politikan'ny lisitra fotsy tamin'ny volana Desambra 2009. Ireo olona miasa tena izay manao ny raharaham-barony an-tserasera no tena voakasika indrindra.
Niara-nataon'ny Minisiteran'ny Fampahalalam-Baovaon'ny Teknolojia (MIIT), ny Biraon'ny Filaminam-bahoaka, ny Biraon'ny Kolontsaina ary ny Fitantanam-panjakana ny Onjam-peo sy ny Televiziona (SARFT) ny fanadiovana ny aterineto noho ny hetsika fanentanana miady amin'ny tsy fahamendrehana. Nanomboka nanadio ny tranonkalan'ny haino aman-jery tamin'ny alalan'ny fangatahana azy ireo haka lisansa ny SARFT tamin'ny volana Septambra 2009, vokatr'izany, tranonkalan-dahatsary miisa 530 mahery no nakatona. Taorian'ny fampiharana ny lisansa, nanohy nanadio ny aterineto tamin'ny volana Novambra 2009 ny SARFT tamin'ny fampiasana ny hetsika fanentanana miady amin'ny tsy fahamendrehana. Tsy hita ny ankamaroan'ny tranonkala BT ary iray tamin'ireo ny BT Shina izay efa nandritra ny enin-taona no tao anaty aterineto ary farany nakatona tamin'ny volana Desambra 2009.
Ny 8 Desambra 2009, nanatontosa resadresaka mivantana ny sampan-draharaham-panjakana miisa 9, anisan'izany ny Biraon'ny Serasera Iraisam-pirenena ao amin'ny AKS sy ny Biraon'ny Fiarovam-Pirenena, ary nanapa-kevitra ny hanao hetsika miady amin'ny torohay vetaveta amin'ny aterineto sy finday teo anelanelan'ny volana Desambra 2009 sy May 2010.
Nilaza ireo Shinoa mpisera aterineto fa ity no famoretana mafy indrindra tamin'ny aterineto teo amin'ny tantara.
Mampiseho ny angondrakitra ofisialy navoakan'ny Biraon'ny Fiarovam-pirenena fa nanakatona tranonkala maherin'ny 9.000 ny birao tamin'ny taona 2009, ary namoaka fampitandremana ho an'ireo tranonkala miisa arivo sy iray alina. Na naato na nakatona ny lohamilina miisa 6.500 raha efa naato ihany koa ny lisansa ho an'ny mpamatsy tolotra aterineto miisa 6 sy mpamatsy tolotra aterineto amin'ny dokambarotra miisa 8 .
Tamin'ny 14 Desambra 2009, nandrara ny olona tsy hisoratra anarana tamin'ny anaran-tsehatra cn ny CNNIC ary nanaiky hanivana ny votoatin'ny hafatra SMS tsy ara-dalàna ny tambajotra lehibe miisa telo. Tombanana fa maherin'ny 1 tapitrisa ny olona voakasika tamin'ity politika vaovaon'ny CNNIC ity ary tranonkala an'hetsiny mahery no noteren'ny foiben'ny angondrakitra hikatona.
Mila mahazo ny lisansa avy amin'ny Mpamatsy Votoaty Aterineto ny olona iray mba hahazoana lisansa ara-dalana ho an'ny karazana tranonkala BBS, ary mila manana orinasa voasoratra anarana miaraka amin'ny renivola mitentina 1 tapitrisa yuan alohan'ny ahazoana ny lisansa toy izany. Midika izany fa hahatonga ny fiharian'ny olona miasa tena amin'ny aterineto ho tsy azo tanterahana ity politika vaovao ity.
Noho ny politikan'ny CNNIC dia nitombo tampoka ny fisoratana anarana “.com” tao Shina. Teo anelanelan'ny 7 ka hatramin'ny 14 Desambra 2009, maherin'ny 180.000 ny fisoratana anarana “cm” avy any Shina, izay fitomboana nahatratra 1300% raha oharina tamin'ny taon-dasa . Ankoatra izay, tranonkala marobe no nifindra toerana ivelan'i Shina.